Colombian mahombekombe pamahombekombe eSeine
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » Colombian mahombekombe pamahombekombe eSeine
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Colombia Breaking News • Culinary • tsika nemagariro • Fashoni Nhau • France Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Kubva munaChikunguru 26 kusvika 30, ProColombia neMarca País vanounza mufaro, mimhanzi nekuravira kweColombia kuParis Plages, chiitiko chezhizha chevaParis nevashanyi, mumoyo weGuta reChiedza. Iyo yekumashure ndiyo chiratidzo Champs Elysees.
Kwemazuva mashanu, maParis uye vashanyi vachakwanisa kunakidzwa neruvara uye mufaro wegungwa reColombia pamahombekombe eRwizi Seine, pakati peParis. Iyo #Colombiamiamor gungwa ichawedzera pamwe nemamita zana, pakati peLes Invalides neAlma mabhiriji.
Paris Plages ndeimwe yemasikati echinyakare mazuva pakati pevaParis. Kubva 2002, zhizha rega rega, iwo mahombekombe eSeine anova mahombekombe ekugadzirira, akagadzirira kugamuchira vashanyi nemabasa ezororo.
“Iri ndiro gore reColombia rekusimudzira nyika. Nyika iri kunyatsotevera maitiro edu ekushandurwa uye iyo France-Colombia Gore chiratidzo chekufarira kuriko kune iyo nyika tsika nemagariro kupa, pamwe nemikana yebhizinesi yakavhurwa nekuda kwerunyararo maitiro. ProColombia yakagadzira chirongwa chakakosha kwazvo pahafu yepiri yegore, kuitira kutsigira vatengesi veColombia mumusika weFrance.
Paris Plages inoratidzira yakasarudzika, asi isu tichavawo kune zvimwe zviitiko zvakaita seSalon du Chocolat; Business Matchmaking ine mazana maviri emabhizimusi eColombia uye mazana maviri emabhizimusi muParis, uye tichave tichiperekedza vanamuzvinabhizinesi vanobva kumatunhu eColombia kuenda kuzviitiko zvakakosha zvekusimudzira kwekushanya ”, akadaro Felipe Jaramillo, purezidhendi wePROCOLOMBIA.
Iwo mahombekombe eColombia anozopatsanurwa munzvimbo nhanhatu dzakasiyana, izvo zvinobvumidza vashanyi kunakidzwa zvisingaverengeke zvetsika dzeColombia uye sarudzo, senge kuverenga bhuku rakanaka naGabriel Garcia Marquez akatsenhama padoor nechinangwa cheEiffel Tower, kana kunakidzwa mimhanzi yenyika, uye kunyange kudzidza kutamba salsa nevamwe vadzidzisi vakanakisa veichi mutinhimira.
Mhando yezvigadzirwa zvinotumirwa kubva kuColombia zvinobvumidza vashanyi kumahombekombe kuti vazive zvimwe zvezvigadzirwa zvinotengeswa kunze kwenyika zvakaita sekushambidza masutu, zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvemaoko kubva kumatunhu akasiyana enyika, kuwedzera kune zvinowanzoitika zvekudya, michero yekunze uye majusi echisikigo ekugutsa nyota yezhizha reParis. Idiki diki dzinozozvivaraidzawo nemitambo yechinyakare yeColombia senge 'La rana', pamwe nenzvimbo yekubatanidza inogoneswa kupenda.
Mhenderekedzo ichavhurwa muna Chikunguru 26 na7: 00 manheru uye ichaverengerwa nekutora chikamu kweMumiriri weColombia kuFrance, Federico Renjifo, uye Mutungamiri weProColombias, Felipe Jaramillo.
Hafu yechipiri yegore reFrance -Colombia yakatanga paFrance munaJune wapfuura mushure mekushanyirwa kweHurumende kweMutungamiri weColombia, Juan Manuel Santos, kuEconomic Forum Colombia France yakaitirwa muBercy.
Zvino kwakauya kubudirira kwekutora chikamu kweColombia senyika yevaenzi muMode City, nguo yemukati yakasarudzika uye yekushambira muEurope, nenhumwa dzemakambani makumi maviri nematatu akatungamirwa naProColombia iyo yakavhura mimwe yemigwagwa.
Esteban Cortázar akaunza hunhu hweColombia kuchitoro chengano cheColette, chimwe chezviratidzwa zvinoyemurwa muParis zvinozivikanwa sejenareta yemafambiro, iri muRue Saint Honoré. Cortázar akaita sarudzo yakasarudzika yeColombia inotengeswa kunze kwenyika, kupihwa kunze kwenyika, senge mabasa emaoko, zvishongedzo, chikafu nemakendi, pamwe neunganidzwa hwakagadzirwa naiye.
Pakati pezvimwe zviitiko zvakarongwa neProColombia gore rino pane Maison & Objet Fair (Gunyana 8 kusvika 12), Mipcom Fair (Gumiguru 16 kusvika 19), Chocolate Hall yeParis (Kubva Gumiguru 28 kusvikaNovember 1), uye bhizinesi reMacrorrueda musangano muParis (Gumiguru 17 na18).
Kutora chikamu kweColombia kunotungamirwa nebazi rezvetsika, uye sachigaro waro wehunyanzvi weIntersectorial Commission inoona nezvekufambiswa kweiyo France-Colombia Gore 2017, uye Commissioner-General, akatumirwa nehurumende yeColombia, Fabián Sanabria.
Intersectoral Commission inonyorwawo nebazi rezvekunze, Ministry of Commerce, Indasitiri ne Tourism. Bazi reNational Education uye Dhipatimendi Rezvekutungamira kweHurezidhendi weRiphabliki. Saizvozvo, ine rutsigiro rwevatsigiri vehurumende, vakadai seProColombia uye Colombian Embassy muFrance, uye neruzhinji uye vakazvimirira vanotsigira vemasangano, bhizinesi uye vezvenhau.
Munyaya yeFrance, timu iri pamberi pebasa iri inotungamirwa naCommissioner-General, Anne Louyot, uye French Institute, iyo agency ye Ministry of Foreign Affairs yezvematongerwo enyika, iyo kweanopfuura makore makumi matatu yaita chirongwa ichi. yeCultural Seasons (Saisons culturelles), iri muchinyorwa chino, inotsigirwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Bazi redzidzo, Dzidzo yepamusoro uye Sayenzi Ongororo; Bazi reGuta, Vechidiki neMitambo; Bazi rezvekurima, Agri-chikafu uye Masango, Embassy yeFrance muColombia uye Network yeFrench Alliances yeColombia.